Hadalada iyo Ficilada Is-khilaafsan ee ku aadan Dowlada Imaaraatiga – FAALLO • Horseed Media
You are here: Home / Featured / Hadalada iyo Ficilada Is-khilaafsan ee ku aadan Dowlada Imaaraatiga – FAALLO
Hadalada iyo Ficilada Is-khilaafsan ee ku aadan Dowlada Imaaraatiga – FAALLO
April 16, 2018 - By: Maxamed Cismaan
Xiriirka sii xumaanaya ee u dhaxeeya dowlada Federaalka Soomaaliya iyo Imaaraatiga ayaa markale banaanka keentay jahwareerka siyaasada arrimaha dibada ee ku aadan khilaafka khaliijka iyo waliba xiriirka ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Imaaraatiga oo meelo badan isaga xiran.
Dowlada Federaalka Soomaaliya ayaa maanta soo saartay Qoraal ay ku sheegayso in ay xal u raadineyso xurgufta soo dhexgashay iyaga iyo Imaaraatiga, waxaana qoraalka dowlada lagu sheegay in labada dal ay ka dhaxeyso saaxiibtinimo iyo wadashaqeyn taariikh dheer.
Dhinaca Puntland, Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo maanta Booqday xarunta ciidamada badda ee Puntland PMPF ayaa isaguna sheegay in kaalinta Imaaraatiga uu ku lahaa tababarada iyo taageerada dhinaca Amniga aysan heysan cid ay ku bedashaan, isagoona sheegay inuu doonayo in ay sii socoto hawlihii dowlada Imaaraatiga ka taakuleyn jireen dhinaca amniga iyo waliba Ganacsiga.
Hadaladan iyo qoraalka maanta kasoo baxay Muqdisho ayaa muujinaya in uu markan socdo dadaal lagu doonayo in lagu xaliyo khilaafka xiligan faraha ka baxay ee u dhaxeeya Abu Dhabi iyo Muqdisho.
Dowlada Imaaraatiga ayaa iyadu sheegtay maalin kahor inay joojisay gebi ahaan taageeradii ay siin jirtay ciidamada Soomaaliya. Maanta oo Isniin ah ayaa sidoo kale la sheegay in la joojiyey shaqadii iyo hawlihii Isbitaalka Imaaraatiga gacanta ku hayey ee Sheikh Zeid oo ku yaal magaalada Muqdisho.
Xiisada hada taagan ayaa ah mid sii xoogeysatay oo faraha ka bixisay xurgufta labada dhinac, kadib falkii ka dhacay 8dii bishan Madaarka Muqdisho oo ay ciidamada NISA ku qabteen lacag gaareysa $9.6 oo laga keenay dalka Imaaraatiga.
Lacagtan ayey dowlada Imaaraatiga sheegtay inay tahay midii ay siin jirtay ciidamada Dowlada Soomaaliya iyo tababarayaasheeda ka jooga wadanka Soomaaliya, isla markaana dowlada ay ka warqabtay, halka ciidamada NISA ee ku sugan Aden Cade International Airport lagu eedeeyey in qaab ka baxsan diblumaasiyada iyo anshaxa ulla dhaqmeen hawlwadeenada Safaarada Imaaraatiga ku leeyahay Soomaaliya.
Xukuumada Federaalka Soomaaliya gaar ahaan xafiiska Raysalwasaaraha Xasan Cali Khayre ayaa la rumeysan yahay in lacagtan ay u adeegsadeen ololihii dhanka dacaayada ee ka dhanka ah Guddoomiyihii Golaha Shacabka ee xilka isaga degay Maxamed Cismaan Jawaari, inkastoo dhacdadan ay dhaawac weyn u geysatay xiriirka labada dal.
Dowlada Federaalka oo xiligan ka gudubtay mawjadihii siyaasadeed ee ka taagnaa Muqdisho kadib iscasilaadii Jawaari, ayaa hada u muuqata inay baadi goobeyso dib usoo celinta xiriirkii ay la laheyd Abu Dhabi, dadaalkan oo aan la aqoon halka uu ku danbeyn doono.
Dhinaca Puntland ayaa iyadu aaminsan in Imaaraatiga kaalin weyn kulahaa taakuleynta ciidamadooda Badda, isla markaana xiisada Muqdisho ka taagneyd ay saameyn xun ku reebtay mucaawinadii ay ka heli jireen Imaaraatiga, taasi oo keentay in Madaxweyne Gaas Maanta shir jaraa’iid ku qabto xeradii ciidamada Imaaraatiga tababarada ku bixin jireen ee Bosaaso, tababarayaashii Imaaraatiga ee halkaasi ku sugnaa ayaa Sabtidii lasoo dhaafay dalka isaga baxay.
Khilaafkan ayaa banaanka usoo saaray in dowlada Federaalka Soomaaliya aysan lahayn qorshe dheer oo siyaasada arrimaha dibada ah isla markaana u shaqeenayso qaab (Ad Hoc) ama kusoo boodo ah oo ay ku dheehantahay xagjirnimo aan ka feker lahayn saameynta ay mustaqbalka fog yeelan doonto.
Waxaa taasi tusaale u ah in Dowlada Soomaaliya sheegtay inay dhex dhexaad ka tahay khilaafka Khaliijka, balse qaabka ay u dhaqmeyso ayaa ah mid u jeen jeerta dhinaca Qatar iyo Doxa, sida laga dhadhansan karay Warsaxaafadeedkii kasoo baxay Wasaarada Amniga todobaadkii tagay oo uu Wasiir Abuukar Islow Ducaale ku sheegay inay baarayaan lacagta Imaaraatiga oo uu ku sheegay in sifo sharci daro inay dalka kusoo gashay, hadalkaasii Ducaale ayaa ahaa mid si weyn uga duwan kan maanta Wasaarada Arrimada dibada kasoo baxay.
Qoraalkii Wasaarada Amniga ee Wasiir ducaale iyo Qoraalka Maanta kasoo baxay Wasaarada Arrimaha Dibada ayaa muujinaya kala aragti duwanaanshaha fog ee ka dhex jira isla dowlada Federaalka Soomaaliya.
Dowlada Qatar oo iyadu kamid ah dowladaha dhaqaalaha siiya Federaalka Soomaaliya ayaa si lamid ah Imaaraatiga boorsooyin lacago ku jira horey u keenay Muqdisho, walow taasi aan wax tilaabo ah laga qaadin. Arrintaasi oo muujineysa in xukuumada ay ka baxday dhex dhexaadnimadii ay sheeganeysay.
Ma xumaha dowlada inay go’aan qaadato balse waxaa khalad ah in dowladu u dhaqanto sida muuqata oo ah in aysan ka fiirsan mustaqbalka fog dhaawaca ay ku keeni karto tilaabooyinka ay qaado xiliyada ay heystaan xiisadaha siyaasadeed ee ka jira gudaha Muqdisho oo lagu dabakho siyaasada caalamiga ah iyo khilaafka ka dhex aloosan Carabta khaliijka oo saameyn xun ku reebi kara dalka Soomaaliya.